नोकिया X6 एक नयाँ नीलो रंग मा चीन मा शुरू | Androidsis
ईडर फेरेनो | | चिनियाँ एन्ड्रोइड, मोबाईलहरू, हाम्रो बारेमा
नोकिया X6 ब्रान्ड को फोन हो कि धेरै कुरा गर्न को लागी दिइन्छ। सुरुमा यसको प्रक्षेपण चीन को लागी विशेष थियो। तर यन्त्रले विश्वव्यापी रुचि को एक धेरै उत्पन्न गरेको छ, र फर्म अन्य बजारहरुमा यसलाई शुरू गर्न को लागी तयारी गरीरहेको छ। यद्यपि अहिले सम्म यो थाहा छैन कि यो कहिले आउनेछ। यसै बीच, एक नयाँ संस्करण चीन मा जारी छ।
जब यो आधिकारिक रूपमा अनावरण गरिएको थियो, नोकिया X6 बिभिन्न रंगहरुमा विज्ञापन गरीएको थियो। यद्यपि अहिले सम्म यो केवल कालो मा उपलब्ध थियो। हस्ताक्षर अब नीलो मा उपकरण को एक नयाँ संस्करण शुरू चीनमा। यो अब उपलब्ध छ।
तेसैले, देश मा सबै प्रयोगकर्ताहरु जो उपकरण को यस संस्करण मा एक रुचि छ, यो संग गर्न को लागी सक्षम हुनेछ। यो6जीबी रैम र4जीबी को एक आन्तरिक भण्डारण संग नोकिया X64 को संस्करण हो। यो मध्य-दायरा मा दुई को सबैभन्दा शक्तिशाली पायदान संग, जो यति धेरै मनपराईन्छ।
यो फोन चीन मा यसको सुरुवात मा धेरै पटक बिकिसकेको छ। यो लाग्दैन कि नीलो मा यो संस्करण एउटै सफलता हुनेछ, तर यो यो नोकिया X6 मा रुचि राख्नेहरु को लागी एक राम्रो विकल्प हो। यसको प्रक्षेपण मा यसको मूल्य १,४ y युआन हो, जुन लगभग २०० यूरो परिवर्तन गर्न को लागी छ.
यसबाहेक, यो नोकिया X6 को अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण अझै पर्खिरहेको छ। यी हप्ताहरु, उपकरण प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र पहिले नै लीक भैसकेको छ। साथै, फोन कम्पनी को अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइट मा देखा पर्‍यो। जुन यसको प्रक्षेपण को पुष्टि गर्न को लागी देखिन्छ।
तर अहिलेको लागी, कम्पनी यस बारे मौन छ। तेसैले हामी यो नोकिया X6 को अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण संग धैर्य हुनु पर्छ। हामीलाई थाहा छ यो आउँदैछ, तर हामीसँग अझै मिति छैन। तर फोन को बारे मा कुरा गर्न को लागी धेरै दिन जारी रहनेछ। तपाइँ यस मोडेलको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » नीलो रंगको नोकिया X6 चीनमा सुरू हुन्छ
एन्ड्रोइड को लागी सब भन्दा राम्रो आरामदायक अनुप्रयोगहरु